Curiye: Cali Maxamuud Xiirane
Tixdan maansada ah waxaa curiyey Cali Maxamuud Xiirane 01/06/04, waana maansadii 11aad ee sil-silad maanseedda la magacbaxay Doodwanaag oo uu billaabay Maxammed Cali Cibaar, uuna kaga dambeeyey Cumar C/nuur Nuux (Nabaddoon), dabadeedna oodda goosatey kaddib Markey soo jiidatay dad badan oo suugaanta daneeya. Cali wuxuu deggenyahay waddanka Ingiriiska, magaalada London, wuxuuna London South Bank University ka bartaa Business Information Technology.
Deegaan waxay tilmaameysaa inaan aqoonyaro mooyee edeb xumadu ummadda Soomaaliyeed ku badnaan jirin, ciqaabaha dalka ka jirana ay u sabab tahay diin ka fogaasho, qabyaalad iyo gaalo raacnimo, daawaduna ay tahay, toowbad keen, ka digtoonaanta dadka gumeysigu ku adeegto iyo in deegaankii, dhaqankii wanaagsanaa iyo diinta lama huraanka ah dib loogu laabto.
Mahadnaq: Waxaa mahad mudan (1) Sheekh Ibraahim Xasan Maxamuud Xiirane oo qayb wax ku ool ah ka qaatey ka talo bixinta, tafatirka, iyo turxaanbixintaba, hal abuurkana ku kordhiyey in door ah. (2) C/salaam Xasan Maxamuud Xiirane oo isna dhowr meelood ka qurxiyey (3) iyo ugu dambeeyntii Cumar C/nuur Nuux (Nabaddoon) oo dhiiri geliyey iney maansadu mudantahay iney la saanqaaddo sil-silad maanseedda Doodwanaag.
Damiirkaan bukaan qabin
Uu ku diirsanaayee
Dawo iyo dadaal iyo
Dareen uu ka muuqdiyo
Daruuraha is doontee
Aan ku doogsaneynee
Sidii danabkii laba dhacay
Anigoon ka didahayn
Salaan baan u dirayaa .
Aaladaha deg-dega oo
Lagu diro akhbaartoo
Daatada is dhaafshee
Waayahan la doortee
E-mailka lagu diro
Raggii noogu duubee
Marna aan ka daaleeyn
Dhambaal baan u dirayaa
Ducana wawgu sii daray
Anna darafta aan jiro
Difaac baan ka gelayaa.
Danta iyo ujeeddada
Ma duuloow tixdaadii
Ee daaha loo rogey
Maanso doqon ma garatoon
Qalbigooda laga dedey
Adaa noo dillaacshee
Innagoon ka daaheeyn
Aan wada daryeelnee
Waa dood wanaagsane
Darafteeda ii qabo
Dawligeeda iga hoo.
Wixii deeq la soo maray
Ama haatan weli dihan
Ayaan daalacdaa weli
Markii dooxa loo kaco
Daran gabiib ku taalliyo
Dusha sare cadduunkiyo
Daruur soo hillaacdiyo
Mayey da’ay aroortiyo
Daad labarka yaaciyo
Markii awrka lagu daro
Hadduu doobbo soo rido
Ari cowska daaqiyo
Lo’du deexda warantahay
Darar ay la riimaan
Dumarkii ku daaleen
Daal li’i ciyaaraan
Koox-koox u didayaan
Habeenkuna markuu dumo
Dayaxa ay la eegtaan
Loo wada dalxiiskaan
Daymadu ka daaleyn
Duul ilaahay siiyoo
Ugu deeqay baan nahay
Rabbaa deeqa bixiyee
Haddaan daalacdaa weli.
Beero laga dambeeyoo
Duni laga yaqaanniyo
Doolo soo baxaysiyo
Webi daadayaa jira
Sisin dibadda loo diro
Darfo geed ka raaraca
Mooskoo la diirtiyo
Miro duur ka baxayiyo
Waxaad dalamsatoo idil
Babaay kaa dejinayaa
Dalka meelkasataba yaal
Saytuun diirka lagu cuno
Dallac yaanyo noqotiyo
Mid qudaarta lagu daro
Dalag soo go’oo badan
Dhul Ilaah daleeyoo
Rabbi darajo siiyoon
Deymadu ka daaleeyn
Duunyiyo wanaag iyo
Kalluun daafta yaalliyo
Midka cirifka daadiyo
Kuwo hoos dabaashiyo
Yaxaasyada la dabo iyo
Qubo doolar lagu gado
Dheeman daakhillada jira
Maacaadiinta kala daran
Xeebta dadabka loo waray
Dekedaha yar iyo weyn
Markabka iyo doonyuhu
Wanka dacasha dheer iyo
Orgi geesku dogob yahay
Rati doobbo lulayiyo
Waxan dibi la dhoofshiyo
Dunidii la yaabtaba!!
daawad geel irmaanoo
Inta doobi loo culo
Caanahu dif siiyaan
Nirgihuna dibbiro iyo
Dharag ay la daataan
Dabadeed ku daabtaan
Dambarkana la maaloo
Dabaadiga wixii haray
Amey deriska siiyaan
Dar ilaaheey khayrkaa
Innagaa ka daahane
Dal shisheeye aad iyo
Dawarsiba miyuu jiray?!
Waxaan jiif la diidoo
Jiirku ii damqanayoo
Dildilloonka ugu wacan
Dalkii qani ahaan jirey
Deegaan wanaag badan
Alle daa’in weeyee
Waxaan dib u xasuustaa
Odayaal da’ weynoo
Darajiyo cisaba mudan
Oo intay is doontaan
Kaftan deris wanaag iyo
Nabad loo daneeyoo
Xigmad la isu duurxulo
Culumadu dadaal badan
Daliil iyo qur’aan iyo
Dadka diinta barayaan
Laba ceel ku dirirtiyo
Dakaniyo dhibkii jira
Durba ay xallinayaan
Dagaal uusan dheeraan
Dadka laysu soo dumo
Colaaddana la dabar jaro
Xaqa aan la daayicin.
Duggaal geed leh oo weyn
Ooy duqoow ku xaalaan
Diiwaan ku xeertaan
Kolkay doodda furayaan
Ducaa lagu hormari jiray
Dulucdeedu ay tahay
Wixii naga dahsoomee
Aqoonteen ka durugtee
Ama nagaba diimoon
Eeboow ha nagu dilin
Ciqaab dalaq ha nagu siin
Dembigeenna noo dhaaf
Waxaan daacad loo dhihin
Amey eexi dabataal
Deg-deg nooga qabo oo
Rabbow naga dabool taas.
Duruufihii la soo maray
Daqar iyo dhib kale iyo
Dooxitaan koleey tahay
Diyo reer isugu yimid
Gartoo aan la duudsiyin
Duwiddeedu ceeb tahay
Kii diida doqon yahay
Diciifnimona loo qiro
Dadka looga wada digo
Oon loo durbaan tumin
Daba dhilifna loo noqon
Dib loo xiro gacmaha oo
Waxan dib u xusuustaa
Dadkoon laysku sii dirin
Dabin qoolan lagu dhicin
Ibleys loo dallaal noqon
Dabka aan la sii hurin
Dambaaburo la sii kicin
Degmo kale la sii gubin
Dawan been ah loo lulin
Reerkana dam laga dhigin
Dadku nabad daneeyaan
Waayeel duuban uu jiro.
Xilliyada is doorshiyo
Kolba heer duruufuhu
Waa xaalka dunidee
Aan dareen xun qabin buu
Dooraale gaal iyo
Daalim mid ah na soo galay
Siin buu la soo degey
Waxaan diin lahayn iyo
Dabbaal buuna duufsadey
Dastuur buu inoo qorey
Kuwii diidey oo nacay
Dabley buu u soo direy
Hunguri doonayuu helay.
Qof dalkiisii iibsadey
Doofaar sidiis iyo
Alla doori weeyee
Waa lagu daneystoo
Duf ku baxe inuu yahay
Doolar buu ku siyaa
Dawladnimada aan rabin
Ayaguu u doorbidey
Doorbinkey wateen iyo
Diiraddey u dhiibteen
Direyskiina loo reeb
Albaabkuu ka sii degey
Daaqadduu ka soo galay
Dugsi buu u soo dhigay
Duruus buu u meeriyey
Kuwuu baray dabaashee
Dallacaad kasbaday baa
Maamul loo diyaariyey.
Qaar u duugan baa jira
kuwa daba ordaayoo
Dirri iyo cad-ceed iyo
Duur baas jafaayoo
Kaafir baa duqoodaa
Waa la sii dar-daarmoo
Diinta dooriyuu yiri
Kaan i dabarucleeynoo
Igu dayanin anigoon
Dulli ii ahaannoo
Ka diqooda xumahoo
Diira oo ka dhiidhiya
Aan la wada dagaalnee
Wada dayriyuu yiri
Xabsiyana ha loo diro.
Qallinkey ku duugeen
Dacay inay na geliyaan
Ama nagu duqeeyaan
Diyaaraadka lala iyo
Wax kastoo na dabar jara.
Waxaan taas ku darayaa
Waxa ay nin doorkiyo
Ducaaddiyo wax garadkiyo
Kuwa diinta fidiyiyo
Intii samo u dooddiyo
Munkar diide laysaba
Haddii uu dareemoo
Dullinnimo ka dhiidhiyo
Mar unbay duntaayooy
Doodse waxay ka joogtaa
Ooy su 'aasha diran tahay
Inaan wada dareernoo
Is doonanno ha joogtee
Jirri lagu daneystiyo
Day-day aan dhammaan iyo
Dagaalkiyo shiddada iyo
Dabka nagu baxaayoon
Abidkii dameyn iyo
Kala duruggu waa maxay?.
Shirkan laga dambeeyee
Dan shisheeye leeyahay
Docashada wax baas iyo
Dib u dhacani waa maxay?
Maxaa gaal na daba dhigay?
Riyo duur ku lumay iyo
Deero kala haboowdiyo
Geel diday miyaan nahay?
Damiinnimadu waa maxay?
Maxaa dibadda noo diray?.
Dumar qaar umulo yahay
Maxaa loo dagaajiyey?
Daaraha qalaad iyo
Dal shisheeye naga riday?
Dawarsiga maxaa baday?
Yaa dabinka noo dhigay?
Oo naloogu daw galay?.
Xaaska amarka diiddiyo
Boorso dibad u tuurkiyo
Ilmo laga dambeeyoon
Xumaan daa la dhihi karin
Haddey deris wareegaan
Dukaan shay ka doonaan
Dabadoodu halis tahay
Dibna loo arkeyn abid
Dareenka iyo yaabkiyo
Dulligaani waa maxay?!!
Iska daadi ubadkiyo
Ha daboolan madaxee
Tinta daraf guduudsiyo
Goonnada dillaaca leh
Xuddun deylku waa maxay?!.
Waxbaa taas ka sii daran
Ragga dahabka qaatiyo
Dhegta durani waa maxay?!.
Timo qaar la dabayiyo
Qaar kaloo ka sii daran
Ninka dumar la moodoo
Duqa wiil ku dara iyo
Daba rogadku waa maxay?!.
Waxaa kaaga sii daran
Ilaah loo dusinayoo
Nebi lagu daraayiyo
Malaa’igtoon la deyn iyo
Muslimkoo is durayiyo
Diin aan laga xishooniyo
Danbi kii u weyn iyo
Dabbaalnimadu waa maxay?
Yaa duway axkaamtii?
Oo dilay akhlaaqdii?.
Duulkii Caad wixii rogay
Dogob-dogob u soo riday
Qoomu luudna dabarjaray
Kuwey caro dabooshee
Daanyeerta laga dhigay
Dabaadigii ka soo haray
Xoolo daaqa cawskiyo
Kuwey duunyo dhaantoo
Dacayaha mariidka leh
Dameera uu ibliis wado
U dareershay jahannamo
Doorshaan wal-waal iyo
Dareemihii dhinteen iyo
Kuwaan xumo ka diireeyn
Shayaaddiin la deyrshiyo
Xaabo daadku qaatiyo
Dameer dhaanka raacdiyo
Dambas biday miyaan nahay?
Haruub daatay oo dhacay
Duceysane ku boodoo
Dhaqso daba qabtaa iyo
Qalbi soo duxaayiyo
Daacadnimo ma haynaa?
Dacda ma ka kaceeynaa?
Mise dalamsashada iyo
Iska daaqid mooyee
Feker wayska diidnaa?!.
Dalqadaas wixii mari
Adoon daalin oon jabin
Ama aan dagaag mudan
Safar dheer ku dabo lumin
Ayaa daa’imkeen qoray
Deeqdana Allaa lehe
Waxaa iga dar-daarana
Inta aan la dabar go’in
Danaheen an garannoo
Dalkii aannu aadnoo
Diinta aan u noqonnee
Dib dhulkeenni noo rara.
Dacwad kale waxaan iri
Dab ninkii u diirtaa
Dambaskiis ka cararee
Sida looga wada digey
Anna waa ku darayaa
Nin ku dagay kumuu dilin
Dareenkiisa kuu sheeg
Haddaan laga digtoonaan
Culamadii duqii diley
Waa loo darsanayaa !!
Kuwo doobbiyaa jira
Oon doowr u soo marin
Ayey daawo yeesheen
Ooy daba ordaayaan
Loona yahay dalaalimo.
Waxaan taa ku sii dari
Qofay duumo qabatoo
Dawdarnimo ka nabad galay
Hadduu damac ka leeyahay
Inuu duni ku ceeshaa
Dabiib buu la doontaa
Deg-deg wuxuu ku cararaa
halkeey daawo taallee
Dabool nagama saarnee
Kala dilay walaalaha
Deriskiina kala diray
Isku dirada jaaniyo
Dayuus dhaqanki weeyoo
Dulmi baa u aabbaa
Duddo lagu xareeyiyo
Deyrkeedu waa naar
Dembigaa u hooyaa
Geed daanno gaartoo
Laamuhu ka daatoo
Isku dii dumaayoo
Dacwoonaaya baa yiri:
Afka daamurtaa lihi
Anigaa is dooxoo
Daabkaygaa i dilayoo
Ii kaa dibrinayee
Mayrax igama diirteen
Dogobkey ma jebiseen
Diirka igama hoosheen
Docda nalaka soo galay
Ee naloogu dawgalay
Miskiin deeg nin fuuloo
Sida daab masaareed
Dirqis lagu hagaayiyo
Diirka nala wadaagoo
Dhaqankii duggaaga leh
Ayaa ina dabraayoo
Sir halkaan ku duugniyo
Tigree sooma duuleen
Darxumana ma geysteen!!.
anoon durkinin sheekada
Qoomkaan is doorine
Is dulleynin abidkood
Ilaahey ma dabar jaro
Ma dulmiyo addoomaha
Dubbihiisu kuma dhaco
Daciifiinna kama dhigo
Haddey diinta raacaan!.
Daqal jaan ku soconniyo
Doow aan habboonayn
Iska daba wareeg iyo
Dullinimo ku faannoo
Adigaa dulqaad liyo
Naxariis wax deeqdee
Ilaahoow na daba qabo
Damiirkeena soo celi
Diinteenna noo dhowr!!.